बच्चाहरूको कस्ता कस्ता अपरेशन कसरी गरिन्छ, कति खर्च लाग्छ (भिडिओ) :: Setopati
डा. नृपेश राजभण्डारी बाल शल्यचिकित्सक
बच्चाहरूमा धेरै किसिमका रोग र समस्याहरू हुन्छन्। तिनीहरू जटिलताका हिसाबमा शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतया हामीले बच्चाको पेट, मृगौला, पिसाब फेर्ने ठाउँ, दिशा गर्ने ठाउँ, हर्नियालगायतको शल्यक्रिया गर्ने गर्छौ। शल्यक्रियाका क्रममा अधिकांश उपचार दुरबिनबाट गर्ने गरिन्छ।
बच्चाहरूले भन्ने, बोल्ने वा दर्शाउने भाव हेरेर रोगको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा पेडियाट्रिक डाक्टरले दिएको सल्लाह अनुसार हामी बच्चाहरूको शल्यक्रिया गर्ने गर्छौ। कतिपय अवस्थामा बच्चाका अभिभावकले भनेको आधारमा आवश्यकक जाँच गरेर सर्जरी गर्ने गरेका छौ।
सर्जरी गर्ने क्रममा अधिकांश बच्चामा हर्नियाको समस्या हुन्छ। धेरै छोरा बच्चाको अन्डा पेटमा हुन्छ। जन्मने बेलामा अन्डकोशमा ओर्लने हुन्छ। धेरैमा त्यो बन्द हुन्छ। तर १-२ प्रतिशतमा बन्द नहुने भएकाले यहाँबाट पेटको पानी, जाली बोसो वा आन्द्रा अन्डकोशमा आउने समस्यालाई हर्निया भनिन्छ। धेरैजसो बच्चाहरू यो समस्या लिएर आउनुहुन्छ। यसको लागि दुरबिनबाट सानो प्वाल बनाएर सर्जरी गरिरहेका छौं।
योबाहेक बच्चामा पेट दुख्ने, मृगौलाको समस्या र दिशा/पिसा फेर्ने ठाउँको समस्याको पनि सर्जरी हुने गर्छ। आन्द्रामा समस्या हुने रोगको पनि बेलाबखत हामी सर्जरी गरेर निको पार्ने गर्छौ।
योबाहेक जटिल रोगहरू, जस्तै जन्मजात रोग मुटुको रोग, दिशा/पिसा फेर्ने प्वाल हुनुपर्ने ठाउँमा नभएर अर्को ठाउँमा हुनु या बनाउनु पर्ने जस्ता जटिल समस्याहरू ३-४ घन्टा लगाएर अपरेशन गर्दै आइरहेका छौ।
पछिल्लो समय धेरै कुरामा टेक्नोलोजिकल सहज भएको छ। यद्यपी अहिले पनि केही केही अत्यन्तै जटिल किसिमका समस्याको सर्जरी नेपालमा सम्भव भइरहेको छैन।
धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल अस्पतालमा एकदमै न्यूनतम् मूल्यमा बच्चाहरूको शल्यक्रिया हुने गरेको छ।
यहाँ न्यूनतम् ५ हजारदेखि अधिकतम् २५ हजारसम्ममा जुनसुकै शल्क्रिया पनि हुने गरेको छ। यति मात्र होइन यहाँ असाहय, गरिब तथा पिछडिएका बर्गका लागि निः शुल्क उपचार पनि हुँदै आएको छ।
हर्नियाको शल्यक्रिया गर्न अधिकतम् ७ हजार ५०० रूपैयाँ खर्च लाग्छ भने जटिल बिरामी भएको बच्चाको अपरेशन गर्न २५ हजार रूपैयाँ जति खर्च लाग्ने गर्छ।
सेतोपाटीले मानव स्वास्थ्यमा देखापर्ने विभिन्न रोगका विषयमा सम्बन्धित दक्ष चिकित्सकलाई भेटेर रोग र निदानबारे कुरा गर्ने गरेको छ। आज बच्चाहरूमा कस्ता कस्ता शल्यक्रिया हुन्छन् र के कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल अस्पतालमा विगत ५ वर्षदेखि बाल शल्य चिकित्सकको रूपमा कार्यरत डा. नृपेश राजभण्डारीसँग भिडिओ कुरा गरेका छौं।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २६, २०७८, १२:०९:००